Video:-Tirakoobka shaqaalaha Puntland oo gabagaba maraya ugu danbayna gaaray G.Sool – Idil News
Video:-Tirakoobka shaqaalaha Puntland oo gabagaba maraya ugu danbayna gaaray G.Sool
Guddiga tiro koobka iyo tayaynta shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Puntland ayaa gaarey gobollada Sool iyo Cayn si’ ay halkaasi uga soo sameeyaan tiro koobka shaqaalaha rayidka ah ee dawaladda eek a hawl gala gobolladaasi.
guddoomiyayaasha gobolladaasi yo degmooyinkaasi ayaa ka hor intaan tiro koobku bilaaban waxa ay si weyn uga qayb qaateen sii diyaarinta iyo abaabulidda shaqaalaha rayidka ah ee ku kala sugan degmooyinka iyo tuulooyinka iyagoona ugu dambayn ku guuleystey inay shaqaalaha isugu geeyaan magaalo Madaxyada labadaasi gobol si’ay guddiga ugu fududaato shaqada tiro-koobku.
Muddadii uu socdey tiro koobku ayaa waxaa lagu diiwaan geliyey dhammaan shaqaalihiii saxda ahaa ee dawladda hore ugu diiwaan gashanaa kuwas oo shaqooyin rasmi ah oo cayiman u haya dawladda si loo kala saaro shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha loo yaqaano caaglaha.
Barnaamijka tiro koobka shaqaalaha dawladda ayaa waxa uu kamid ahaa ballanqaadkii Madaxweynaha ee ahaa dib u habaynta shaqaalaha rayidka ah ee dawladda, waxaana fududaynta barnaamikan dawladda ka caawinaya Bangiga adduunka.
Hore waxaa tiro koobkan oo kale looga soo sameeyey gobollada Bari, Karkaar, Gaardafuu, Mudug, Sanaag, Highland iyo Nugaal iyadoona ay gobollada Sool iyo Cayn yihiin goobihii ugu dambeeyey ee lagu diiwaangeliyo shaqaalaha dawladda,hoos ka daawo muuqaalka.